Ofụri Esịt Automatic Nkpuchi Production akara
Tọrọ ntọala na 2008
12 afọ ahụmahụ
More karịa 18 ngwaahịa
Ihe karịrị 2 ijeri
Ọfọn emepụta Portable Fiber laser marking igwe Atụmatụ 1. Elu àgwà eriri generator, ezi mma ntụpọ, ngwa anya ike njupụta edo, anụ mmepụta ngwa anya ike, na-ezukọ na ngwa ina nke mainstream ahịa; 2. RayFa onwe-mepụtara digital elu-ọsọ galvanometer nyocha, obere size, elu na-agba na magburu onwe kwụsie ike; arụmọrụ esịmde mba elu larịị; 3. Ike akara usoro, optimizes ndị nhazi data dị ka dị iche iche ngwa, na-akwado m ...
Ọfọn emepụta Desktop Fiber laser marking igwe Atụmatụ 1. Elu àgwà eriri generator, ezi mma ntụpọ, ngwa anya ike njupụta edo, anụ mmepụta ngwa anya ike, na-ezukọ na ngwa ina nke mainstream ahịa; 2. RayFa onwe-mepụtara digital elu-ọsọ galvanometer nyocha, obere size, elu na-agba na magburu onwe kwụsie ike; arụmọrụ esịmde mba elu larịị; 3. Ike akara usoro, optimizes ndị nhazi data dị ka dị iche iche ngwa, na-akwado mu ...
Desktop CO2 Laser akara ...
CO2 laser ọnwụ igwe
Ọfọn emepụta CO2 Laser ịkpụ igwe laser engraver 1390 osisi MDF Laser ịcha igwe na-eme ka zuru iji kọmputa mmemme akara na space akara n'ibu ngagharị akara, nke mere na ọnwụ bụ kpọmkwem na nhazi mmetụta na-akakwa mma maka ahịa mkpa. Anyị na-ejere ahịa anyị dị ka ha mkpa ha, otú ahụ ka anyị na-ahọrọ ndị kasị mma software imewe, n'ibu Ọdịdị, latrik na akụkụ nhọrọ iji na-kwụsiri ike, na nkenke na ọsọ na klas mbụ ...
Handheld eriri laser ịgbado ọkụ igwe Handheld l ...
Efe Fiber Laser Mar ...
Ọfọn-emepụta na-efe efe Fiber laser marking machin ...
Iberibe CO2 Laser marki ...
Ọfọn emepụta Desktop Fiber laser marking machi ...
Ọfọn emepụta CO2 Laser ịkpụ igwe laser engra ...
Xintang Community, Houjie Town Dongguan OBODO, Guangdong Province, CHINA
Thermometer Digital, Baby Thermometer Clinical, Pulse Oximeter, Thermometer Gun,